China Wood super bass USB bluetooth 2.0CH feo stereo feo Hi-Fi hifi mpitam-boky (BT-106) Famokarana sy ozinina | Eyin
Wood audio super bass USB bluetooth 2.0CH feo stereo audio Hi-Fi hifi mpitam-boky (BT-106)
Famatsiana herinaratra: AC110V ~ 240V 50-60Hz
Unitin'ny mpamily: 4 ″ x2 + 1 ″ x2
Herin'ny famoahana: 60W
Valiny matetika: 60Hz ~ 20KHz
Haben'ny vokatra: W160xD220xH275MM
Function: Bluetooth / AUX IN / Optical / AUX OUT / USB
• 1XAUX INPUT - Fifandraisana mora amin'ny fitaovana rehetra izay misy output 3.5mm an'ny headphone na output RCA roa.
• kinova Bluetooth- Mora ny mampifandray fitaovana amin'ny alàlan'ny Bluetooth hankafizanao mozika mahafinaritra.
• mozika fampidirana USB-Play amin'ny alàlan'ny fitaovana USB.
• QUALITO SOUND STUDIO - Famokarana feo voajanahary avy amin'ny tweeter dome landy 13mm sy singa 4 santimetatra feno.
• FARANY KARAZARA CLASSIC - Ny fanamboarana hazo MDF avo lenta vita amin'ny vinina vita amin'ny hazo dia manome voninahitra lehibe ny haingon-trano rehetra.
Fampisehoana azo antoka
Ireo mpandahateny am-baravarankely BT-106 dia nanambatra fijery an-doha amin'ny fahatsapana kalitao am-peo ankehitriny. Raha mitady mpandahatra rakotra boky mora vidy sy marobe miaraka amin'ny feo tsy marim-pototra ianao, ny mpandahateny rakotra BT-106 dia ny rafitry ny mpandahateny 2.0. Manasongadina mpamily bass 4-inch ary seranan-tsambo miorina amin'ny bass reflex, ity rafitra fitenenana mpandefa kitapo ity dia manome fanamarihana basse matanjaka sy manankarena izay feno fanatrehana sy halaliny. Ny famokarana feo mahatoky sy ny fahombiazan'ny BT-106 dia nofinofy audiophiles rehetra. Ny ankamaroan'ny mpanjifa Edifier dia mampiasa ny fitenenana fitehirizam-boky BT-106 hampifandray ny fihodin'izy ireo ho an'ny traikefa tsara indrindra amin'ny audio. Ankafizo ny vinyl mahazatra anao raha mankafy ny fandrosoana amin'ny haitao maoderina.
Fanaraha-maso mazava tsara
Ataovy personalize ny zavatra niainanao tamin'ny fihainoana tamin'ny fitendrena baoritra, treble ary ny feon'ilay feo fitenenana. Ny feon-kira novokarina kalitao dia namboarin'ireo mpandahateny fitahirizam-boky ireo midrange mazava tsara izay manaitaitra ny mpandinika rehetra. Voafetra koa ny fifehezana lavitra mora vidy. Azonao atao ny manitsy ny volony ary mametraka ireo mpikabary hiteny rehefa ilaina izany nefa tsy mila manatratra ireo mpandahateny; hery sy fahalavorariana eo am-pelatananao. Ny Edifier R1280T dia miaraka amina fanaraha-maso tonony eo anilan'ny mpandahateny miasa. Miankina amin'ny safidinao dia azonao atao ny manamboatra micro micro treble sy bass manomboka amin'ny -6 ka hatramin'ny +6 db. Ny fifehezana dizitaly nomerika dia napetraka eo amin'ny sehatra ahazoana aina isaky ny mandeha ny herinaratra ireo mpandahateny.
Fampidirana Dual RCA
Ireo mpandahateny am-boky BT-106 dia mamela anao hifandray amina fitaovana audio marobe amin'ny alàlan'ny fampidirana RCA roa. Raha mijery ny tontonana aoriana ianao dia afaka miteny mora foana ny iray amin'ireny dia mpandahateny mpandefasa ary mpandahateny mavitrika ny iray. Ny mpandahateny mavitrika dia manana fampiasa roa hita ao aoriana. Ireo fampidirana ireo dia mety amin'ny fifandraisana RCA ka hatramin'ny RCA na RCA mankany AUX. Ampifandraiso amin'ny solosaina PC, laptop, tablette, telefaona na firaketana an-tsoratra izy ireo. Ireo mpandahateny dia mifandray amin'ny alàlan'ny tariby mpandahateny mahazatra. Ny karazan-tariby tafiditra ao dia miantoka ny hankafizan'ny mpanjifantsika ny mozikany avy amin'ny ankamaroan'ny fitaovana avy ao anaty boaty.
Previous: Soundbar fakan-tsarimihetsika MAXX BASS ambony kalitao misy subwoofer tsy misy tariby 2.4G (SP-602 misy subwoofer)
Manaraka: Kalitao PC 2.0 USB Gaming TV mpandahateny, Soundbar Bluetooth Speaker (SP-600B)
Bluetooth Soundbar tariby sy tariby
Speaker Bluetooth Wireless azo entina
Factory vidiny miloko mpandahateny RGB Bluetooth W ...
2020 Volavola miavaka fantsom-peo mini-function multi-function ...
Portable USB mini Wired 2PCS birao / laptop ...
Factory Cheap Price 2.0 Small Size Computer Spe ...
ODM fanamboarana hifi mpandahateny hazo passive Hom ...
Mpitondra fitehirizam-boky hazo matanjaka be ho an'ny trano ...
Wifi Soundbar ho an'ny Tv, Karaoke Soundbar, Ireo mpandahateny Soundtro Wifi, Tendrombohitra Tv And Soundbar, Alexa Soundbar, Tv Soundbars,